मिटर रिडिङ, बिलिङ तथा महशुल अनलाइनबाट भुक्तानी कसरी गर्ने ? «
मिटर रिडिङ, बिलिङ तथा महशुल अनलाइनबाट भुक्तानी कसरी गर्ने ?
प्रकाशित मिति : ३ असार २०७८, बिहीबार १९:२७
तपाईलाई अनलाइनबाट मिटर रिडिङ, बिलिङ तथा महशुल भुक्तानी कसरी गर्ने भइरहेको छ? जारी लकडाउनका कारण पक्कै कार्यालयमै गएर मासिक बत्ती भुक्तानी गर्न असहज भइरहेको होला।
धेरै समयपछि एकमुष्ठ रकम तिर्न गार्ह्रो पनि हुन्छ। यस्तो हुन नदिन अनलाइन भुक्तानी गर्न खोजिरहनु भएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसको सजिलो व्यवस्था मिलाएको छ।
कोभिड संक्रमणका कारण मिटर रिडर उपस्थित हुन नसकेर समयमा बिल पाउन नसकेको अवस्था छ।
यस्तो बेला प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्र वा हटलाइन ११५० मा सम्पर्क गरेर आफ्नो मिटर अंक टिपाउन सकिन्छ।
त्यस्तै आफ्नो स्थानीय विद्युत कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि मिटरमा चढेको अंक टिपाएर मिटर रिडिङबारे जानकारी लिन सकिन्छ।
यदि यो प्रक्रिया असहज अथवा फोन सम्पर्क हुन नसकेमा https://cunsumer.nea.org.np मा लगइन गरी प्राप्त निर्देशनअनुसारका विवरणहरू भरेर मिटर रिडिङ गर्न सकिन्छ। नभए प्राधिकरणको एनरोइड एपबाट ‘सेल्फ मिटर रिडिङ’ विधि प्रयोग गरेर आफैंले घर अथवा कार्यलयको मिटर रिडिङ गर्न सकिन्छ।
बिलिङ तथा महशुल भुक्तानी
आफ्नो घर वा कार्यलयमा खपत भएको विद्युत बिलको जानकारी पाएपछि अनलाइनबाटै महशुल भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
यसको लागि विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृत सेवा प्रदायकहरू (ई–सेवा, खल्ती, महालक्ष्मी विकाश बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, पे पोइन्ट नेपाल, आइएमई पे र सिएफएस रेमिट) मार्फत् भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई आफ्नो विवरण सही राख्न पनि अनुरोध गरेको छ। ताकि आवश्यक परेको खण्डमा ग्राहकलाई सहजै सम्पर्क गर्न सकियोस्।ग्राहकले आफ्नो विवरण प्राधिकरणको वेवसाइट नेअ ।ओर्ग ।न्प मा भएको केवाइसी फारमबाट अपडेट गर्न सक्छन्।
अथवा प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयको टेलिफोनमा अथवा हटलाइन ११५० मा सम्पर्क गरेर बिल भुक्तानी गर्ने कार्यालयको नाम, कस्टमर आइडी, कस्टमर नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना टिपाउन सक्छन्।
प्राधिकरणले यी बाहेकका सेवाका लागि प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।
नेप्सेमा दाेहोराे अंककाे गिरावट
सेयर बजारमा दोहाेराे अंककाे गिरावट भएकाे छ । साताकाे दाेस्राे काराेबार दिन साेमबार बजार परिसूचक
भोजपुर: व्यावसायिक अकबरे (डल्ले) खुर्सानी खेती भोजपुरका कृषकको रोजाइमा परेको छ । बजारमा माग राम्रो भए
शुक्रबार सेयर बजार बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक १३.७८ अंकले बढेर १,८६२.०६ बिन्दुमा पुगेको हो।
डिजिटल पेमेन्ट सेवा ‘शेर्वो-पे’ बजारमा आउँदै
काठमाडौं, ९ असार। शेर्वो कम्पनीले डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसका लागि ‘शेर्वो–पे’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।